Zithini izinto zeGmail? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 360
Ixesha elingaphezulu kweGmail wenze izinto ezininzi ezintsha kwaye ngenxa yezi zizathu siza kukubonisa,
Ukujonga incoko: I-Gmail ikuvumela ukuba ubone zonke ii-imeyile ezingenayo neziphumayo, onokuziqinisekisa ngokujonga kwakhona ii-imeyile zakho zangaphambili ngolwazi. Kwimeko apho ungaboni ngamehlo lo mbono kufuneka ungene:
Yenza okanye ukhubaze ukhetho.
Qhaqha ukuthumela: Uthumele i-imeyile ongasafuniyo ukuyenza, ukuze ukwazi ukurhoxisa ukuthumela kufuneka uthathe amanyathelo ngokukhawuleza, kwaye uye kwiscreen sasekhohlo kwaye ucofe u-undo.
Iimpawu zokumakishaI-Gmail ikuvumela ukuba ukhethe ukuba zeziphi ii-imeyile ofuna ukuziphawula zibalulekile kwaye zeziphi ezingekhoyo. Ukwenza lo msebenzi kufuneka usebenze kwaye ungene:
Iilebula: Baququzelela ukulawulwa kwemali eninzi yeposi. Ungayenza ngale ndlela ilandelayo:
Yiya kuseto ngokubanzi.
Yiya kwiTekisi ukhetho.
Khetha ukhetho olufunayo.
izigabaIi-imeyile ziququzelelwe ngokuzenzekelayo kwaye zinokongezwa ngezaziso, iiforamu, ezentlalo okanye ngokwenyusa. Indlela yokufikelela kufuneka ufake "Iimpawu" ezantsi.
SnoozeOlu khetho lwenza i-imeyile ifihle de kube lixesha elifunayo, oko kukuthi, liyanyamalala kwibhokisi engenayo kwaye sinokuvela kwakhona ngexesha elifunekayo.
Ishedyuli yokuhanjiswa: Ukuba ufuna ukuthumela i-imeyile efike xa uyifuna, ungayicwangcisa ngokucinezela utolo ecaleni kweqhosha lokuthumela.
UbumfihloI-Gmail ikunika olu khetho lwenza ukuba ii-imeyile zakho zibe zezabucala, kunye nje:
Jonga umhla wokuphelelwa.
Cofa ikhowudi yokufikelela.
Jonga ukhetho olungenakuthunyelwa, ukukopa okanye enye.
Iitreyi zokufaka ezininzi: I-Gmail ngalo msebenzi ungongeza ukuya kwiibhokisi zebhokisi yemiyalezo engenayo ejolise kwezona ziphambili. Unokwenza ngale ndlela:
Yiya kuseto oluphambili
Ifestile ye-Inbox ye-Multiple iya kuboniswa.
Uqwalasela ezo uza kuzongeza.
Iimpendulo ezichazwe kwangaphambiliUnokwenza ii-imeyile ezinde kwaye unokumakisha impendulo ukuba uhlala ubhala impendulo efanayo. Ungayenza ngale ndlela:
Yiya kuseto oluphambili.
Cofa kwiPendulo eziCwangciswe kwangaphambili.
Imeyile ezingafundwanga: faka ileyibhile yokubhaliweyo: ayifundwanga kwiwindows yokukhangela.
Cola imifanekiso: Ngolu khetho unokutsala imifanekiso kunye nezinye iifayile kwii-imeyile ze-Gmail usebenzisa i-Chrome.
Hlanganisa iimephu zikaGoogle: Ngale nto ungafaka imephu emzimbeni womyalezo.
Umguquleli weGoogleElona thuba libalaseleyo uGmail likunika lona lokuguqula imiyalezo ye-imeyile.
Sebenzisa amaXwebhu kaGoogleIkuvumela ukuba wenze amaxwebhu ngayo nayiphi na i-imeyile. Amaxwebhu aqhotyoshelweyo anokuguqulwa abe ngamaxwebhu ahambelanayo.
Sebenzisa Ikhalenda Google: Ungathumela imiyalezo "yeSMS" enomsebenzi osisilumkiso.
Imeyile ephambiliUya kuba nakho uku-odola ibhokisi yakho engenayo kunye nembali yee-imeyile zakho, uzicwangcise kwaye uzihambise kwiitreyi ezahlukeneyo, ngokwemfuno onayo. Unokuguqula useto lwe-imeyile ye-Gmail.